ဘန်လေနဲ့ပွဲမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပြီးနောက် မာနေးရဲ့ ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အပြုအမူကို ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
ဘန်လေနဲ့ပွဲမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပြီးနောက် မာနေးရဲ့ ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အပြုအမူကို ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ယာဂန်ကလော့က ဆာဒီယိုမာနေး ဟာ ဘန်လေ ကို လီဗာပူး တို့ ၃ ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲအတွင်းက အခြေအနေ တစ်ခုနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေခဲ့တာလို့ အတည်ပြုလိုက်ပေမယ့် အရာအားလုံး အိုကေတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆီနီဂေါ လက်ရွေးစင် ဟာ ပွဲချိန် ၈၅ မိနစ်မှာ လူစားလဲခံ ခဲ့ရပြီးနောက် အရန်ခုံသို့ သွားရာလမ်းကြောင်းမှာ အလွန် ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ကြည့်ရတာကတော့ လူစားလဲခြင်း မခံရမီ မိုဟာမက်ဆာလားဟာ ဂိုးရဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးမှာ ရှိနေတဲ့ ၎င်းကို ဘောလုံး ပေးပို့လိုက်ရမယ့် အစား တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ ကိုယ်တိုင် ဂိုးသွင်းဖို့ အားထုတ်ရာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဖျက်ထုတ်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး လီဗာပူး အသင်း ပွဲကို ပိုမို သက်တောင့်သက်သာ ဦးဆောင် နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး လွဲခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မီနာ ၊ ဂိုးမက်ဇ် ၊ ဟန်ဒါဆန် နဲ့ ဖာမီနို တို့နဲ့ အတူ ကြံ့ခိုင်ရေး နည်းပြ အန်ဒီရီယာကွန်မေယာ တို့ဟာ မာနေးကို စိတ်လျော့ဖို့ ၀ိုင်းဝန်း တိုက်တွန်း ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ကလော့ က တပ်မိုးမှာ အသင်း အတွက် ဒုတိယမြောက်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ မာနေးဟာ ပုံမှန် အားဖြင့် အသင်းမှာ အနေအေးတဲ့သူလို့ ဆိုလိုက်ပြီး ဒီညမှာတော့ ပုံမှန်နဲ့ အတူ ခြားနား သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့က သူဟာ ပွဲအပြီး အ၀တ်လဲခန်း ထဲမှာ ဒီပြသနာကို သေချာ ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ကစားသမား နဲ့ စကား ပြောခဲ့ ပြီးပြီလို့ ထုတ်ဖော် လိုက်ပါတယ်။
ကလော့ က “ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ သူ စိတ်ပျက်နေခဲ့တာတော့ သိသာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဆာဒီယိုဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ပြောခဲ့ ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေ သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်စီ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ လူတွေပါ။ ပွဲအတွင်းက အခြေအနေ တစ်ခုကို သူမပျော်မရွှင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ လုံးဝ အိုကေပါတယ်။
သူ ဒီလို အပြုအမူမျိုး ထပ်လုပ် သွားအုံးမှာလား ? မလုပ်နိုင်လောက်တော့ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ မဖြစ်ခဲ့သလို သူဟာ မှားယွင်းတဲ့ ဘာစကားကိုမှလည်း မပြော ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပုံမှန် ပြုမူနေကြ ပုံစံနဲ့တော့ အနည်းငယ် ကွဲပြား သွားခဲ့ပါတယ်။
အမှန်ပါပဲ။ ဒါဟာ ပုံပြင် သေးသေးလေး ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည် ထားပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ကျွန်တေ်ာတို့ ဒီတစ်ပတ်မှာ နိုင်ငံပွဲတွေ ရှိနေတာကြောင့် ပွဲမကစား ရတဲ့ အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ရေးသွားမယ် ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ဖတ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံပွဲတွေ ပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်သူမှ ဒါကို မှတ်မိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ ဒီပြသနာ ကို ဖြေရှင်းဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အခိုက်အတန့် ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံး ကောင်းနေပါတယ်။ တကယ်ပါ အားလုံး အိုကေပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ လီဗာပူး ရဲ့ ၁၃ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲ ဖြစ်ပြီး ကလပ်ရဲ့ စံချိန်သစ်လည်း ဖြစ်ကာ ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ ၄ ပွဲကစား ၄ ပွဲစလုံး အနိုင် ရထားခဲ့တာကြောင့် ထိပ်ဆုံး နေရာမှာ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲနဲ့ ရပ်တည် နေပါတယ်။
လီဗာပူးရဲ့ ခြေစွမ်း ရလဒ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့ က “ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း ဒါဟာ ကောင်လေးတွေ second ball ကို အကောင်းဆုံး ကစား နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ first ball အားလုံးနီးပါးကို အသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ ၀ုဒ် ဘန်း တို့ ရှိနေတဲ့ တိုက်စစ်မှာ ဒီလို လုပ်ပြ နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အ၇မ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ဟာ second ball အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားကွက် ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အရမ်းကို ကောင်းလှပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချက်ချင်း ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေ လျှင်မြန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ နဲ့ နေရာလွတ်တွေကို ကောင်းစွာ အသုံးချ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ကယ် ကောင်းပါတယ်။
ဒါဟာ ဘန်လေ အသင်း လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကြိုတင် ဖြတ်တင်ဘော အချို့ လုပ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ နေရာကောင်းမှာ ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ခံစစ်စည်းကို ကျော်ပြီး ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေပေါ့။ ဘန်လေ အသင်း ဒီနေ့မှာ လူကျွံဘော ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့သလဲ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြ နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီအခြေအနေတွေကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး ကစား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘနျလနေဲ့ပှဲမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပွီးနောကျ မာနေးရဲ့ ဒေါသတကွီး ဖွဈနခေဲ့တဲ့ အပွုအမူကို ရှငျးလငျးလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
ယာဂနျကလော့က ဆာဒီယိုမာနေး ဟာ ဘနျလေ ကို လီဗာပူး တို့ ၃ ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ပှဲအတှငျးက အခွအေနေ တဈခုနဲ့ ပကျသကျပွီး စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈနခေဲ့တာလို့ အတညျပွုလိုကျပမေယျ့ အရာအားလုံး အိုကတေယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဆီနီဂေါ လကျရှေးစငျ ဟာ ပှဲခြိနျ ၈၅ မိနဈမှာ လူစားလဲခံ ခဲ့ရပွီးနောကျ အရနျခုံသို့ သှားရာလမျးကွောငျးမှာ အလှနျ ဒေါသတကွီး ဖွဈနခေဲ့ပွီး ကွညျ့ရတာကတော့ လူစားလဲခွငျး မခံရမီ မိုဟာမကျဆာလားဟာ ဂိုးရဖို့ အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေးမှာ ရှိနတေဲ့ ၎င်းငျးကို ဘောလုံး ပေးပို့လိုကျရမယျ့ အစား တဈကိုယျကောငျးဆနျစှာ ကိုယျတိုငျ ဂိုးသှငျးဖို့ အားထုတျရာ ပွိုငျဘကျရဲ့ ဖကျြထုတျမှုကို ခံခဲ့ရပွီး လီဗာပူး အသငျး ပှဲကို ပိုမို သကျတောငျ့သကျသာ ဦးဆောငျ နိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေး လှဲခဲ့လို့ ဖွဈပါတယျ။
မီနာ ၊ ဂိုးမကျဇျ ၊ ဟနျဒါဆနျ နဲ့ ဖာမီနို တို့နဲ့ အတူ ကွံ့ခိုငျရေး နညျးပွ အနျဒီရီယာကှနျမယော တို့ဟာ မာနေးကို စိတျလြော့ဖို့ ၀ိုငျးဝနျး တိုကျတှနျး ခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ကလော့ က တပျမိုးမှာ အသငျး အတှကျ ဒုတိယမွောကျဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ မာနေးဟာ ပုံမှနျ အားဖွငျ့ အသငျးမှာ အနအေေးတဲ့သူလို့ ဆိုလိုကျပွီး ဒီညမှာတော့ ပုံမှနျနဲ့ အတူ ခွားနား သှားခဲ့တယျလို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။ ယာဂနျကလော့က သူဟာ ပှဲအပွီး အဝတျလဲခနျး ထဲမှာ ဒီပွသနာကို သခြော ဖွရှေငျးဖို့ အတှကျ ကစားသမား နဲ့ စကား ပွောခဲ့ ပွီးပွီလို့ ထုတျဖျော လျိုကျပါတယျ။
ကလော့ က “ဘာဖွဈတာလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါတယျ။ သူ စိတျပကျြနခေဲ့တာတော့ သိသာ ထငျရှားပါတယျ။ ဆာဒီယိုဟာ သူ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို မထိနျးခြုပျ နိုငျခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျော ဒီအကွောငျးကို ပွောခဲ့ ပါတယျ။ အားလုံး အဆငျပွေ သှားပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျစီ စိတျခံစားခကျြနဲ့ အသကျရှငျနတေဲ့ လူတှပေါ။ ပှဲအတှငျးက အခွအေနေ တဈခုကို သူမပြျောမရှငျ ဖွဈခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ လုံးဝ အိုကပေါတယျ။
သူ ဒီလို အပွုအမူမြိုး ထပျလုပျ သှားအုံးမှာလား ? မလုပျနျိုငျလောကျတော့ ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို ဖွဈတကျပါတယျ။ ဘာမှတော့ မဖွဈခဲ့သလို သူဟာ မှားယှငျးတဲ့ ဘာစကားကိုမှလညျး မပွော ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပုံမှနျ ပွုမူနကွေ ပုံစံနဲ့တော့ အနညျးငယျ ကှဲပွား သှားခဲ့ပါတယျ။
အမှနျပါပဲ။ ဒါဟာ ပုံပွငျ သေးသေးလေး ဆိုတာ ကြှနျတျော နားလညျ ထားပါတယျ ။ အခုဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ဒီတဈပတျမှာ နိုငျငံပှဲတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ပှဲမကစား ရတဲ့ အတှကျ ဘုရားသခငျကို ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခငျဗြားတို့ ဒီအကွောငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး တဈစုံတဈရာ ရေးသှားမယျ ဆိုရငျ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောတို့ ဒါကို ဖတျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံပှဲတှေ ပွီးသှားရငျတော့ ဘယျသူမှ ဒါကို မှတျမိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒါဟာ ဒီပွသနာ ကို ဖွရှေငျးဖို့ ကောငျးမှနျတဲ့ အခိုကျအတနျ့ ပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အားလုံး ကောငျးနပေါတယျ။ တကယျပါ အားလုံး အိုကပေါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဒီနိုငျပှဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ လီဗာပူး ရဲ့ ၁၃ ပှဲဆကျ နိုငျပှဲ ဖွဈပွီး ကလပျရဲ့ စံခြိနျသဈလညျး ဖွဈကာ ကလော့ ရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီ ၄ ပှဲကစား ၄ ပှဲစလုံး အနိုငျ ရထားခဲ့တာကွောငျ့ ထိပျဆုံး နရောမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ နျိုငျပှဲနဲ့ ရပျတညျ နပေါတယျ။
လီဗာပူးရဲ့ ခွစှေမျး ရလဒျနဲ့ ပကျသကျပွီး ကလော့ က “ကြှနျတျော အရငျကတညျးက ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကြှနျတျော ဒီကို ရောကျလာခဲ့တဲ့ နောကျပိုငျး ဒါဟာ ကောငျလေးတှေ second ball ကို အကောငျးဆုံး ကစား နိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ first ball အားလုံးနီးပါးကို အသာစီးရခဲ့ပါတယျ။ ၀ုဒျ ဘနျး တို့ ရှိနတေဲ့ တိုကျစဈမှာ ဒီလို လုပျပွ နိုငျဖို့ ဆိုတာ အရမျးကို ခကျခဲပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ second ball အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားကှကျ ရှိနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ အရမျးကို ကောငျးလှပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ခကျြခငျြး ဘောလုံးပေးပို့မှုတှေ လြှငျမွနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ နဲ့ နရောလှတျတှကေို ကောငျးစှာ အသုံးခြ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ တဈကယျ ကောငျးပါတယျ။
ဒါဟာ ဘနျလေ အသငျး လုပျနိုငျခဲ့တဲ့ တဈခုတညျးသော အရာ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကွိုတငျ ဖွတျတငျဘော အခြို့ လုပျခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့ နရောကောငျးမှာ ရှိနခေဲ့ရပါတယျ။ ပွီးတော့ ခံစဈစညျးကို ကြျောပွီး ဘောလုံး ပေးပို့မှုတှပေေါ့။ ဘနျလေ အသငျး ဒီနမှေ့ာ လူကြှံဘော ဘယျနှဈကွိမျ ဖွဈခဲ့သလဲ ကြှနျတျော မသိပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံး လုပျပွ နိုငျခဲ့ပွီး ဒီအခွအေနတှေကေို လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈနေ ခဲ့ပါတယျ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံး ကစား နိုငျခဲ့ပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။